I-Instapage: Yonke into eku-In-One PPC kunye neSisombululo sePhepha lokuSombulula iphepha | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 3, 2020 NgoLwesibini, Novemba 3, 2020 Douglas Karr
Njengomthengisi, eyona nto iphambili kwimizamo yethu kukuzama ukuthengisa, ukuthengisa, kunye namanyathelo entengiso esiwathathileyo ekuhambiseni amathemba ethu kuhambo lwabathengi. Abathengi abanomdla phantse abaze balandele indlela ecocekileyo ngokuguqula, nangona kunjalo, nokuba amava amangalisa kangakanani.
Xa kufikwa kwintengiso, nangona kunjalo, iindleko zokuthenga zinokubiza kakhulu… ke siyathemba ukuzinyanzela ukuze sikwazi ukubona kunye nokuphucula iziphumo zethu zomkhankaso. A iqonga lephepha lokufika ihlala isetyenziselwa le nto. Nazi izibonelelo ezi-5:
Ukufumana iphepha leziBonelelo
Igalelo -Ngokugcina iphepha lokufika kude kwezinye iindlela zokuguqula, sinokufumana ukuqonda okucacileyo kokubuya kwethu kutyalo-mali lwentengiso.
ukuziphatha -Ngokuthintela ukubandakanyeka kunye nezinye izibonelelo, sinciphisa ukhetho kunye nezenzo zethu ezinokuthi sizithathe, siqinisekisa ukuba banakho ukuguqula kunokuba bakhangele.
Ukulula -Ngoyilo oluhle, olukhawulezayo, kunye namaphepha okufika alula, sonyusa amathuba okuba undwendwe luya kuguquka, ngaphandle kwesixhobo.
Ulawulo lweeNkokeli -Isakhono sokuqinisekisa ngokulula, ukugcina, ukungenisa, indlela, kunye nokuphendula kwizikhokelo njengoko zigcwalisa iifom zobhaliso.
Testing -Kusebenzisa iqonga elibandakanya iindlela zokuvavanya, sinokuhambisa iintloko ezahlukeneyo, umxholo, iindawo zefom, kunye noyilo olonyusa amazinga okuguqulwa ngokwezibalo.
Umzekelo wephepha lokufika
Qaphela ezinye zeempawu eziphambili zekhasi lokufika elilula apha ngezantsi-ukunciphisa ukuhamba, izinto ezinamandla ezichaseneyo, ukubizela inyathelo elinye, isihloko, isishwankathelo, kunye neendawo zebhulethi… konke kuqhuba umsebenzisi ukuguqula:
Iqonga lekhasi lokufika lokumisela
Nantsi intshayelelo yevidiyo kunye nokujonga ngokubanzi Iqonga lephepha lokufika kwendawo:
Amanqaku ePlatform yokufika
I-Instapage's customizable builder yenza ukuba amashishini enze amaphepha omhlaba amangalisayo, aguqukayo. Ngokuhlelwa kwemeko yokuma kwimeko, ngaphezulu kweefonti ezingama-5,000 33, kunye nemifanekiso ezizigidi ezingama-XNUMX ukuze usebenze nayo, umakhi wephepha lokumisa i-Instapage uthatha iintlungu ngaphandle kokuvelisa uphawu, ukuguqula iphepha elinomtsalane. Iimpawu zibandakanya:
Ubeko lweetemplate esekwe kuShishino kunye neMeko yokuSebenzisa -I-200 + iitemplate ezinokuzenzekelayo kwaye zilungiselelwe zenzelwe ukwandisa utshintsho lwakho.
Ukusebenzisana kwiphepha elibonwayo- Sebenzisana ngokuthe ngqo kunye nabadlali beqela kunye nabathengi ngexesha langempela lokuhlengahlengisa inkqubo yokujonga uyilo. Yenza iphepha lakho lenziwe, liphononongwe, lipapashwe, kwaye liguqulwe ngokukhawuleza.
form Umakhi - Yongeza iifom ezinokwenziwa ngokwezifiso ngamacandelo amaninzi, uluhlu lokuhlahla, okanye amaqhosha erediyo ngonqakrazo nje olumbalwa. Ukuqokelela ngokulula ulwazi olongezelelekileyo kwithemba lakho ngokuguqula iifom ezintsonkothileyo zibe ngamanyathelo amaninzi. Ukunciphisa amanqaku okhuko kunye nokufumana abasebenzisi ukuba bazibandakanye negama lakho.
Ulawulo lweeNkokeli Gcina, ukudlula, ukuthumela ngaphandle, okanye indlela ekhokelela kwi-Instapage okanye ukudibanisa kunye nokuyidlulisela kwiCRM yakho okanye kolunye udibaniso. Fumana i-imeyile kunye nesaziso sedashboard xa uvelisa izikhokelo ezintsha.
Imiyalezo yoQinisekiso Yenza umyalezo wokungqinisisa obonakala xa iindwendwe zizalisa ifom yakho.
Enkosi kunye namaphepha oqinisekiso -Yazisa ababhalisi bakho abatsha ukuba uyayixabisa inzala yabo emva kokuba bangenise ulwazi lwabo kwifomu yakho yokungena kunye nephepha lombulelo enkampani.
Ukuhanjiswa kweeaseti zedijithali -Zigcinele inyathelo ngokumisela inkqubo yokuhambisa izinto ze-digital ngokuzenzekelayo Unqakrazo olumbalwa unokuqinisekisa ukuba xa ukhokelo lwakho luza kungena kwisithembiso, lwenziwe lufumaneke kubo lokukhuphela kwangoko.
Ukukhawuleza -Yakha ngokukhawuleza amakhulukhulu amaphepha okufika asebenzise iibhloko zekhasi ezizodwa onokuthi uzenze ngokwezifiso, ugcine, uphinde uzisebenzise. Khetha kukhetho lweetemplate zebhloko esele zenziwe, ezinjengeentloko, iinyawo, ubungqina, kunye nokunye, okanye wenze iibhloko zakho zesiko ukusuka ekuqaleni.
widgets -Ngokuzenzekelayo yongeza umaleko wokusebenza kumaphepha akho okufika kunye namawijethi.
Mobile iibhloko -Yenza iphepha lokufika eliphendulayo eliphathwayo ngonqakrazo olunye nje. Ukwenza ulwenziwo ngakumbi, unokufihla iibhloko zephepha kwimbono eshukumayo ukuze wenze amava okukhangela awona afanelekileyo. Yongeza uguquko ngokwenza amava afanelekileyo eselfowuni kubatyeleli bakho, ngaphandle kokusebenzisa umphuhlisi.
Iibhloko zehlabathi -Ukulawula iitemplate zehlabathi ngaphandle komzamo wokuqinisekisa ukuba onke amaphepha ayathobela uphawu. Yakha isiko, kwi-brand Instablocks enjenge-header, i-footer, okanye iibhloko zemveliso oza kuyisebenzisa kumakhulu okanye kumawakawaka amaphepha. Emva koko, hlela ibhloko kube kanye kwaye utshintsho lwakho luboniswe kwiphepha ngalinye ibhloko ebonakalayo.
Phuma kwiiPopups zeNjongo kunye neFom yokuFota iNkokeli- Yenza izinto ezizenzekelayo ezinokusekwa ngokubhekisele kwizinto ezithile ezibangela OptinMonster, Umnikezeli ophambili wesoftware yokuphuma enenjongo yokuphuma, ukwandisa amaxabiso okuguqula kumaphepha akho okufika.
Imigca yesiqhelo (kuGoogle kunye noTyibit) Iifonti zesiko zikwenza ukuba ubonakalise uphawu lwegama lakho. I-Instapage lelona qonga libonelela ngokufikelela kwi-premium ye-5,000 + ye-Webfonts phantse amaxesha angama-100 ngaphezulu kukhetho lwamagama kunazo zonke iisoftware zephepha lokufika kwintengiso.
Umphathi weeasethi zomfanekiso -Yongeza kwaye uhlele iifoto zakho kwisixhobo sokuyilwa kwephepha lokufika ukuze uqhubeke nokwenza ngokwakho okanye unyuse.
Uvavanyo lokwenyani lwecala A / B lokwahlulahlula Lungiselela amaphepha akho okufika ukuze uguqulwe ngovavanyo lwe-A / B kuwo omabini amaphepha okufika kunye namaphepha e-AMP. Landa umkhondo wokuziphatha kweendwendwe, uvavanyo lokwahluka kwezinto ezintsha, ubeko, kunye / okanye uyilo, kwaye wandise amazinga akho okuguqula.
Amaphepha okufika e-AMP -Yakha amaphepha eselfowuni alayisha kwangoko, yenza amava okukhangela okungcono, kwaye uqhube uguquko oluninzi ngamaphepha okufika anikwe amandla yiGoogle AMP. I-Instapage inayo kuphela umakhi ekuvumela ukuba wenze kunye novavanyo lwe-A / B lokuhlola iphepha usebenzisa isakhelo se-AMP, akukho mvelisi ufunekayo.
Ukulayisha itemplate kunye nokukhuphela -Khawuleza kwaye ngokulula layisha itemplate ukusuka ThemeForest (okanye wenze eyakho kwasekuqaleni). Khuphela ukuze wabelane nokwakha iphepha lakho lokufika kunye nehlabathi.
Bhala ngaphezulu uKhuseleko -Ukuphucula imveliso kunye nokulungelelanisa ukuhamba komsebenzi ngokuthintela abasebenzisi ukuba bangabhali ngaphezulu komnye umsebenzi.
Ukuguqulela -Buyisela iinguqulelo zangaphambili zephepha lokufika ukuze ube noxolo lwengqondo xa usenza, uyila, okanye uhlela.
Ubushushu -Impepha zokufudumeza umzimba zinika ulwazi oluneenkcukacha ngendlela iindwendwe zakho ezinxibelelana ngayo namaphepha akho okufika. Oku kukwazisa ngcono ukuba zeziphi izinto zephepha kuvavanyo lwe-A / B.
Uhlalutyo lokuGuqulwa -Ukudibanisa ngokuthe ngqo kunye neGoogle AdWords kunye neAnalytics ukulungiselela lula kwaye wenze iindleko zexesha lokwenyani kutyelelo ngalunye kunye ne-lead-lead metric ebonakalayo kanye kwiqonga le-Instapage. Emva koko, dlulisa imethadatha ekhokelayo kwiCRM yakho okanye kwinkqubo yentengiso.
Ukulahla ngaphakathi kwePixel UkuKhangelwa -Sebenzisa ukulandelwa kwe-pixel yokulandela umkhondo ukulandela uguquko lwangaphandle okanye ukuphinda ujonge iindwendwe ezingaguqukiyo kwiphepha lakho lokufika.
Ukuhlelwa kwamaqela kuLawulo loMkhankaso -Isixhaso senze lula ukulawulwa kwephulo ukuze abathengisi be-PPC bakhawuleze bakhe amaqela eentengiso kwiindlela zabo zentengiso ezahlukeneyo, iimveliso, amanqaku kunye neenkcukacha zabantu.
IiNgxelo zeXesha leNene -Fumana idatha yexesha lokwenyani, nangaliphi na ixesha, kuzo zonke izixhobo zakho, nanini na.
zobuqu -Yila ngokukhawuleza i-1 eyodwa: 1 ad-to-page post-click landing page amava kubo bonke abaphulaphuli noMlawuli wamava. Yonwaba abathengi bakho ngamava ephepha ahambelana nawe aya kukunceda wandise uguquko, wandise intengiso yedijithali ye-ROI, kunye nokwehlisa iindleko zokufumana.
Unxibelelaniso -Dibanisa ngokulula i-Instapage kunye nentengiso esetyenzisiweyo yanamhlanje, umntu wesithathu, uhlalutyo, iCRM, intengiso ye-imeyile, kunye neqonga lokuzenzekelayo.
Iimpawu zeQonga lokuHamba kweArhente zibandakanya
Ukuhlawulwa ngokokuCofa (PPC) kunye neearhente zentengiso, i-Instapage sisisombululo esifanelekileyo se-Arhente ngokunjalo. Iimpawu zearhente zibandakanya:
IiAkhawunti eziMkhulu -Ukulawula ngokulula iiakhawunti zabaxumi ngokutshintsha phakathi kweeakhawunti zakho ngaphandle kokungena kwiiakhawunti ezahlukeneyo. Jonga uluhlu lweeakhawunti onokuthi ufikelele kuzo, tshintshela kwiakhawunti ofuna ukusebenza kuyo, kwaye ujonge ulwazi lweakhawunti / lomnini weakhawunti okwangoku ngaphakathi konxibelelwano olumanyeneyo.
Iindawo zokusebenzela zabucala zabathengi -Lungelelanisa indawo yokusebenza yeqela, lawula ngcono ukusebenzisana kweqela, kunye nokugcina imfihlo yabathengi ngokumema amalungu eqela kwiindawo ezithile zokusebenza. Unokwenza ngokukhawuleza ukufikelela kwimimandla yokupapasha kwiindawo ezithile zokusebenza, lawula ukudityaniswa kwesiko kwaye, upapashe ngokukhuselekileyo kwi-CMS yangaphandle ngenkqubo yethokheni.
Iimvume zeLungu leQela Ukwabelana ngomsebenzi wakho neqela okanye abathengi akusathethi ukuba udlulise ulwazi lwakho lokungena. Nge-Instapage, unokubonelela ngokulula ukufikelela kuphela kumalungu eqela elifanelekileyo okanye abathathi-nxaxheba, kumaphepha afanelekileyo okufika.
Ukupapasha kwiiNdawo ezingapheliyo -Ngokwahlukileyo kwamanye amaqonga ephepha lokufika, i-Instapage ikuvumela ukuba upapashe amaphepha kwimimandla eyahlukeneyo kwiinkqubo ezininzi zolawulo lomxholo.
Cela iDemo yeDilesi
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco amdibeneyo Ukukhwela, Umxholo webali, yaye OptinMonster Apha.
tags: iphepha lokufika kwentengisoiqonga lephepha lokufikaiphepha lokufika kwephuloUhlalutyo loguquleloumakhi wefomgoogle adwordsUkukhwelaukudityaniswaiphepha lokufikaumakhi wephepha lokufikaimizekelo yephepha lokufikaiifom zephepha lokufikaUkulungiswa kwephepha lokufikaiqonga lephepha lokufikabamba phambiliiifom zokubambaokupoqayoPPC